Slovakia, Polonina: (Tsy) Fahafantarana ny Traikefa Mikasika ny Euro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2011 20:13 GMT
Araka ny fitsapan-kevitra vao haingana navoaka tao amin'ny Gazeta Wyborcza, dia manohitra ny fidirana ao amin'ny fari-bola euro ny ankamaroan'ny Poloney.
Ny tsy fahazoany ny traikefa Slovaky ny mety antony iray mety mahatonga izany.
Jakub Loginow, Poloney monina ao an-drenivohitra Slovaky, ao Bratislava, no nanoritsoritra tamin'ireo Slovaky mpamaky ny bilaoginy ny fomba fahitan'ny namany ny toe-karena Slovaky taorian'ny nidirany tao amin'ny fari-bola euro amin'ny maha-firenena tatsinanana faharoa teo aloha niditra tao.
Vola Euro ao amin'ny banky. Sary avy amin'ny Flick , aranjuez1404 (CC BY-NC-ND 2.0).
Araka ny hevitry ny mpanoratra, mijery azy io ho nandamoka tanteraka ny ankamaroan'izy ireo, izay hafa tanteraka amin'ny fomba fijerin'ny Slovaky: tamin'ny fitsapankevitra fararano natao ny taona 2010, ny 89 isan-jaton'ny Slovaky no mirona amin'ny fampiasana vola tokana ho an'ny Vondrona Eoropeana iray manontolo; ary tamin'ny fitsapan-kevitra tamin'ny Febroary 2011, 63 isan-jato ny mponina Slovaky no nahatsapa fa tsara ny nidirana ao amin'ny fari-bola euro.
Loginow nanoratra toy izao:
Tamin'ny taona 2007, nihevitra ireo mpanao politika Poloney fa tsara kokoa ny miditra ao amin'ny fari-bola euro amin'ny taona 2011 na amin'ny taona 2013. Ankehitriny, tsy misy olona miresadresaka momba ny hanekena ny Euro intsony fa ny tombatombana manokana dia amin'ny taona 2018-2022. Mahaliana ny mahita fa ny antony mampihemotra ny fandraisana ny Euro tahaka izao dia noho i Slovakia. Na dia eo aza ny zavamisy, mihevitra ny ankamaroan'ny Poloney fa diso lalana ny nandraisan'i Slovakia ny Euro.
“Niakatra ny vidin-javatra noho ny Euro”
Maro ireo Poloney no mahatsiaro ny lanjan'ny Koronina Slovaky nandritra ny taona maro. Saingy “nandritra ny taona 2004-2008, nitombo vidy ny Koronina Slovaky raha oharina amin'ny Euro sy ny Zloty ihany koa” – ary nihen-danja kosa ny Zloty Poloney. “Tamin'ny taona 2007, 2.90 PLN ny 1 euro, ary tamin'ny volana Aprily 2009, 4.5 PLN (nitombina teo amin'ny 4 PLN taty aoriana).”
Koa raha ampitahaina tamin'ny folo taona lasa, lafo kokoa ho an'ny Poloney ny fiainana Slovaky, ary hitan'izy ireo ho toy ny “avo roa heny ny vidin-javatra ao Slovakia.” Noho izany indrindra, nanary “mpizahan-tany Poloney an-jatony” i Slovakia.” Araka ny fijerin'ny Poloney, “mifototra amin'ny fizahan-tany ny toekaren'i Slovakia” (ary ny faritra be tendrombohitra akaiky ny sisintany Poloney dia tahaka izany indrindra) – na dia “miteraka 5 isan-jaton'ny harin-karena anatiny fotsiny aza ny fizahan-tany” no tena marina raha toa ka maro ny Poloney no mihevitra fa tokony eo ho eo amin'ny 40 isan-jato izany.”
Nanamarika i Loginow fa “tsy nisy vidin-javatra niakatra” nandritra ny fotoana nidiran'i Slovakia tao amin'ny fari-bola Euro. Nitranga izany noho ny antony maro samihafa. Ankoatra ny krizy ara-bola maneran-tany, nisy ihany koa ny fandaharan'asan'ny governemanta manao hoe “Hovaintsika ny vola fa tsy ny sandany.”
Nandritra ny volana maromaro taloha sy taorian'ny fidirana tamin'ny Euro, tsy maintsy asiana ventim-bola “anankiroa” amin'ny Koronina sy Euro eny amin'ny magazay Slovaky. Nisy hatrany ny fomba ara-dalàna ahafahana manohitra ny vidin-javatra niakatra tsy nisy antony mazava. Slovaky marobe, na dia izany aza, no nivonona fa nisy ny fiakaran'ny vidin-javatra tanelanelan'ny fanambarana ny lalàna vaovao sy ny daty nampiharana azy ho lalàna manankery.
Noho ny fitotonganan'ny vola Poloney sy Hongroà ary i Czech tamin'ny fiandohan'ny taona 2009, sy ny nahafahana nanao fampitahana mora foana sahady ny vidin-javatra eny amin'ny magazay Aotrishiana sy Slovaky, izany fotoana izany no vanim-potoana namirapiratra tamin'ny fiantsenan'i Slovaky tany ivelany. Nanampy tamin'ny fihazonana ny vidin-javatra ao Slovakia ho ambany hatrany izany, na dia tsy nanampy ny toe-karena tao an-toerana aza izany.
Fampielezan-kevitra manohitra ny Euro
Nampiasaina betsaka teo amin'ny sehatra Poloney ny olana teo amin'i Grika sy ny ohatra teo amin'ny fahalafosan-javatra tao Slovakia. Faly ireo mpisalasala amin'ny Euro sy ny mpanao politika izay “tsy nahomby tamin'ny fanatanterahana ny teny nomena amin'ny fidirana haingana ao amin'ny fari-bola euro” ary “nanemotra ny fiovana tsy maintsy atao, niteraka fatiantoka goavambe”, satria manana hevitra tohanana ” ampisehoany fa tsy mila ny Euro izahay ankehitriny.”
Araka an'i Loginow, tokony ho tany amin'ny faran'ny taona 2009 sy ny fiandohan'ny taona 2010 no namoahan'ny gazety Poloney iray fa mirodana ny toekarena Slovaky noho ny tsy fisian'ny mpizahan-tany Poloney – “ary maro ireo olom-pirenena Poloney no nino izany.”